प्रहरीलाई मानवाधिकार शिक्षा जरुरी भो
नेपालको अनुहार भनेको कानुन व्यवस्था हो । त्यसै पनि दण्डहीन मुलुकका रुपमा नेपाल बदनाम भइरहेको छ, त्यसमाथि महिलामाथि प्रहरीको असुर प्रवृत्तिले नेपाल कस्तो देखियो होला ? भाइरल बनेको नेपाल प्रहरीको यो दानवीय स्वरुपले नेकपाको शासन र शासनको प्रवृत्तिलाई पनि नकारात्मक देखाएको छ । यसकारण सुरक्षा निकायलाई मानवाधिकार शिक्षा जरुरी भयो ।
बच्चा बोकेकी महिलालाई लठ्ठीले ठोक्नु ठोकेको यो दृश्य । त्यो पनि रङरुट सिपाहीले होइन, प्रहरी निरीक्षकले । इन्स्पेक्टर स्तरका प्रहरीको यो गति छ भने अरु तह र तप्काका प्रहरीको तरिका कस्तो होला ? राजधानीमा यस्तो अत्याचार देख्नुपर्छ भने दूरदराज, गाउँतिर प्रहरी ज्यादति कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसप्रकारका गतिविधिले प्रहरीलाई सत्य सेवा सुरक्षा र जनमैत्री बनाउँछ कि डरलाग्दो देखाउँछ ? यो दृश्य नेपाल प्रहरी, सशस्त्रले हेर्नुपर्छ र आफूभित्रका कमी कमजोरीलाई सुधार्न तत्काल कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयले जनतासँग प्रत्यक्ष र दिनहुँ सम्पर्कमा रहने प्रहरी सेवा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा तालिम नै दिनुपर्छ ।
नेपाल यस प्रकारका घटना देखाएर नेपालको सुरक्षा र मानवाधिकार छ भनेर कसैले पनि बोल्न सक्दैन । देशको इज्जत जाने काम गर्छन् किन सुरक्षाकर्मी ?
यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । अर्थात विश्वव्यापी भएको छ । प्रहरी निरीक्षक आफूजत्रै लाठो बोकेर बच्चा बोकेकी महिलालाई निर्घात कुटिरहेका छन् । यो महिला हिंसा, यो मानवाधिकारविरोधी कार्य, यो विभेद र निषेध, ज्यादतिको पराकाष्ठा हो ।
यो घटना लुकाउन र छोपछाप पार्न सकिने खालको थिएन, त्यसैले छानबिन समिति बन्यो । नेपालमा छानबिन समिति भनेको गालटारा कार्य हो ।
प्रहरी अधिकृत रहेछन् देवीप्रसाद पौडेल । भैंसेपाटीका हाकिम । कुनै व्यक्तिले बोलायो भन्दैमा गएर लाठीचार्ज, त्यो पनि अर्काको घर कम्पाउण्डमा । निषेधित क्षेत्रमा त यस प्रकारको ज्यादति बर्जित हुन्छ, त्यसमाथि अर्काको घर कम्पाउण्डमा । उनले महिला प्रहरी लिएर जान सक्थे, पक्राउ गरेर थानामा ल्याएर केरकार गर्न सक्थे । लठ्ठी कानुन होइन, लठ्ठी भनेको कानुन मास्ने हतियार हो ।
सेनाका सेवानिवृत्त सहायक रथी हेम खत्रीको घर । प्रहरीको लाठी खाने महिला हेमा श्रेष्ठ हुन् । आश्चर्य उनी आफै महिला अधिकारकर्मी र अभियन्ता समेत रहिछिन् । सैनिक हेमको अर्की महिलासँगको लसपस, स्वीकार गर्नैपर्छ भन्न पुगेकी रहिछन् हेमा । बिबाद बढ्यो, सैनिकले प्रहरी बोलाए, प्रहरीले बच्चा बोकेकी अधिकारकर्मीमाथि जाइलागे । उनले महिला प्रहरीको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि ख्याल गरेनन् ।
धर्ना दिएकोले प्रहरी गएको भन्ने ललितपुर प्रहरीको भनाइ छ । धर्ना दिएकालाई धर्नाबाट हटाउने लाठी हो कि अरु कुनै उपाय पनि छ ? नेपाल प्रहरीले बोल्ने भाषा लाठी नै हो । त्यो पनि निर्घात कुटपिट ?
यो घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय सतर्क भएको छ । छानबिन सुरु गराएको छ । छानबिन मात्र यो घटनाको उपचार हुनसक्दैन । यो घटना पुरुष र महिलावीचको हिंसा, प्रहरीको अमानवीय व्यवहार, प्रहरीको जनमैत्री चरित्रमा दाग, प्रहरीको हाँसी हाँसी सेवा दिने कबुलको बर्खिलाप पनि छ । यसकारण पनि प्रहरीलाई मानवाधिकार के हो भनेर पढाउन जरुरी छ । प्रहरीको काम गरोस्, प्रहरीको उपादेयता हुनुपर्छ, शान्ति सुरक्षामा प्रहरीले कर्तव्य निर्वाह गर्नैपर्छ । तर, तरिका सही हुनुपर्छ ।
यस्ता साना घटना होस् अथवा ठूला ठूला आपराधिक घटना, प्रहरीले आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत हुनैपर्छ ।